सरकार राहत कसलाई ? « Bagmati Online
आज भोली धेरै उठ्ने विषय हो यो । कोभिड १९ को कहरले गर्दा नेपाल सरकारले २०७६ साल चैत ११ बाट लकडाउन घोषणा गर्याे । लकडाउन पहिलो , दोस्रो हुँदै तेस्रो हप्तामा पुगिसकेको छ । विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरुले घुँडा टेकिसकेका छन् । यही अवस्था हो भने लकडाउन लम्बिन सक्छ । जनताहरु भन्दै छन् विश्वका शक्तिशाली राष्ट्र र छिमेकी मुलूकमा बढ्दै गरेको मृत्यु देखेर सरकारले लकडाउन बढाँउन सक्छ । जनता आतिन्छन् भनेर एक एक साता गरेर लकडाउन बढाइ रहको चर्चा सुनिन्छ । यँही जनताको गहिरो चिन्ता पनि छ । अब दैनिक गुजारा कसरी ? एउटा समूह भन्दै छ सरकार लकडाउन लम्बियाउ तर जनताको स्वास्थ्य माथि खेलवाड नहोस् । अर्को जमात छ सरकार कसरी दैनिक गुजारा चलाउ । अर्को एउटा समूह छ , हरेक दिन नयाँ नयाँ परिकार पकाएर सामाजिक सञ्जालमा क्वारेन्टाइनको पहिलो दिन, दोस्रो दिन , तेस्रो दिन भनेर विभिन्न परिकारको फोटो राख्ने ।